१० बाइबल पदहरू प्रार्थना गर्न जब तपाईं कन्फ्युज हुनुहुन्छ प्रार्थना अंकहरू
घर बाइबल पदहरू १० बाइबल पदहरू प्रार्थना गर्न जब तपाईं अलमल्लमा पर्नुहुन्छ
आज हामी १० बाइबल पदहरू छलफल गर्नेछौं जब तपाईं अलमलमा पर्नुहुन्छ प्रार्थना गर्न। भ्रम खराब मानसिक स्थिति हो। यो एक मान्छे को यात्रा विघ्न को लागी र सफलता को बाटो को लागी एक लामो र कठिन छ। दिशा कुञ्जी हो। एक व्यक्ति जीवन मा केहि रकम र उद्देश्य पूरा गर्न, उसले आफ्नो जीवनको लागि परमेश्वरको निर्देशन हुनु पर्छ। भगवानले प्रत्येक पटक के भनिरहेछ भनेर उसले बुझ्नै पर्छ। विवेकी मनोभाव हुनु किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर यसले बताउँछ।
जब भ्रम सेट गर्दछ, तपाईं भगवानको आवाज र दुश्मनको आवाज बीचको भिन्नता पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई थाहा हुँदैन कि जब परमेश्वरको आत्माले तपाईंलाई डोर्याइरहेको छ वा कहिले तपाईंको शरीर बोल्दछ। कसलाई विवाह गर्ने, लिने जागिर, बस्ने ठाउँ र अन्य धेरैमा एक भ्रमित हुन सक्छ। यदि तपाईं अलमल्लमा हुनुहुन्छ भने, निम्न बाइबल पदहरू प्रार्थना गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
हितोपदेश:: - - "तेरो सारा भरोसा परमेश्वरमा राख्, र तेरो आफ्नै समझ-शक्तिमा भरोसा नगर्।"
जब परमेश्वरले तपाईंलाई केही निर्देशनहरू दिनुहुन्छ जुन तपाईंलाई मूर्खतापूर्ण देखिन्छ, जसरी परमेश्वरले अब्राहमलाई उनको एक मात्र बच्चा बलिदान चढाउन भन्नुभएको थियो। यस प्रकारको निर्देशनले मानिस दिमागमा भ्रम पैदा गर्न सक्छ। तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि यदि यो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जुन वास्तवमै बोल्दै थियो वा शैतानले तपाईंलाई एक द्रुत प्ले गर्न कोशिस गरिरहेको छ। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको तपाईको सारा हृदयले प्रभुमा भरोसा राख्नु हो।
मानवीय समझ शैतानको गल्तीहरू र छलकपटको लागि असुरक्षित छ त्यसैले हामी प्रभुमा भरोसा राख्नुपर्दछ। जब हामी अलमल्लमा पर्दछौं र यस्तो देखिन्छ कि हाम्रो टाउकोले अब समाधान देखिरहेको छैन, यही नै समय हो हाम्रो प्रभुमा भरोसा राख्ने। दाऊदले प्रभुमा भरोसा राखेका थिए त्यसैले उनले गोल्यतको सामना गरे जुनसुकै आकार र सैन्य अनुभवको बाबजुद पनि।
भजन १ 143: - - “बिहान तपाईंको अतुलनीय प्रेमको वचन मलाई दिनुहोस्, किनकि मैले तपाईंमा भरोसा राखेको छु। मलाई जानु पर्ने बाटो देखाउनुहोस्, किनकि म तपाईंलाई आफ्नो जीवन दिन्छु। ”
यो निर्देशनको भजन हो। जब हामी कुन बाटो जाने कुरामा अलमल्लमा छौं, त्यो समय परमेश्वरबाट निर्देशनको लागि खोज्ने समय हो। धर्मशास्त्रले भन्यो मलाई जानु पर्ने बाटो मलाई देखाउनु होस् किनभने म आफैंलाई आफ्नो जीवन दिन्छु। जब हामी प्रभुमा हाम्रो सारा भरोसा राख्छौं, उहाँले हामीलाई जाने बाटो देखाउनुहुनेछ। प्रभुको आत्मा गोलमालको लेखक होइन, प्रभुबाट निर्देशन प्राप्त गर्नेछौं।
१ कोरिन्थी १:1::14 - - "किनकि परमेश्वर भ्रमका लेखक हुनुहुन्न, तर शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसरी पवित्र जनहरूका सबै मण्डलीहरू छन्।"
यो जान्नुहोस् र शान्ति जान्नुहोस्, भगवान गोलमालको लेखक हुनुहुन्न। उसले तपाईलाई समस्यामा पार्ने छैन जुन तपाईलाई धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। प्रभुका निर्देशनहरू शान्ति र ट्रान्भिलिटीका छन्। त्यसोभए, जब तपाइँ गाह्रो निर्देशनहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, जान्नुहोस् कि ती कहिल्यै परमेश्वरबाट हुँदैनन्। त्यसकारण परमेश्वरले चेतावनी दिनुहुन्छ कि हामीले परमेश्वरबाट आएको व्यक्तिलाई चिन्न सबै आत्माहरूको जाँच गर्नुपर्छ।
मत्ती :6:१ And र हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस्, तर हामीलाई दुष्टबाट छुटाउनुहोस्। तपाईंको लागि सँधै राज्य, सामर्थ्य र महिमा हो। आमेन
यो प्रभुको प्रार्थनाको अंश हो जसरी ख्रीष्टले प्रेरितहरूले सोचेका थिए। हामीहरूको विश्वासको जाँच हुने परीक्षामा हामी नपरोस् भनेर यो प्रार्थना हो। यूसुफ आफ्नो मालिक पोर्टिफरकी स्वास्नीको परीक्षामा परेका थिए। यदि ऊ प्रलोभनमा पर्दछ भने, उसले आफ्नो जीवनको लागि परमेश्वरको योजना गुमाउने थियो। सबैले त्यस्ता प्रलोभनहरूको प्रतिरोध गर्न सक्दैनन्, त्यसैले हामीलाई प्रलोभनबाट मुक्त हुन परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
२ तिमोथी १: - - “किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएन। तर शक्ति, प्रेम र एक सुदृढ दिमागको। ”
किनकि हामीलाई डरको आत्मा दिइएको छैन। जब तपाईं डराउनुहुन्छ वा अलमलमा पर्नुहुन्छ, यो शब्दले तपाईंलाई साहस र आश्वासन दिन्छ कि भगवान्‌ले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभयो। हामी ख्रीष्टको अनमोल रगतले छुटकारा पाएका छौं। अचम्ममा पर्दैन, धर्मशास्त्रले भन्छ कि हामीलाई डरको आत्मा दिइएको छैन। ख्रीष्टको आत्माले हाम्रो मरणशील शरीरलाई जीवित पार्दछ।
१ यूहन्ना:: १ - "प्रियहरू, हरेक आत्मामा विश्वास नगर्नुहोस्, तर तिनीहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् वा छैनन् भनेर जाँच्नुहोस्, किनकि धेरै झूटा भविष्यवक्ताहरू संसारमा देखा परेका छन्।"
यो हाम्रोलागि परमेश्वरको वचन हो। हामी मध्ये धेरै जसो भविष्यवाणीमा अत्यधिक विश्वास गर्दछौं, हामीले विवेकको आत्माको लागि परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नै पर्छ। यि धेरै आत्माले बोलेको जस्तो उनीहरु परमेश्वरबाट आएका हुन्, यो प्रभुको अनुग्रह र विवेक चाहिन्छ जो प्रभुबाट आएको हो भन्ने पहिचान गर्न। जब शाऊलले अगमवाणी गरेका थिए उसले परमेश्वरको अगमवक्तहरूको माझमा पसे तर जब कुनै दुष्ट आत्मा आयो, उसले पनि अगमवाणी गर्यो।
त्यहाँ धेरै झूटा भविष्यवक्ताहरू छन् जुन शैतानले तिनीहरूको भविष्यवाणी मार्फत मानिसहरूलाई भ्रममा पार्नको लागि पठाएको छ। सबै आत्माहरूको परीक्षण गर्नुहोस्।
‏‏१ पत्रुस:: ““ होशियार र विवेकी रहो। तिम्रो शत्रु, शैतान एउटा गर्जने सिंह जस्तो छरपष्ट भयो र कसैलाई निल्न खोज्दैछ। ”
धर्मशास्त्रले हामीलाई सँधै सतर्क हुन सल्लाह दिन्छ। शैतानले गर्जनशील सिंहको रूपमा खोज्छ कि कसले खाईन्छ। हामीले प्रभुमा दृढ भएर खडा भएर शैतानको प्रतिरोध गर्नै पर्छ। दुश्मनको योजना र एजेन्डा मानिसहरू बीचमा प्याडेमोनियम र भ्रम फ्याँक्नु हो। तर जब हामी शैतानको प्रतिरोध गर्छौं, बाइबलले यो भाग्नेछ भनेर रेकर्ड गर्‍यो।
लूका २:24:38 “उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, 'तिमीहरू किन विचलित छौ?
सँधै जान्नुहोस् कि ख्रीष्ट शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई गाह्रो परिस्थितिहरूमा पिरोल्नुहुनेछैन। तिमी किन व्याकुल छौ? किन तपाई डराउनुहुन्छ र तपाईको मुटुमा शंका हो। ख्रीष्ट हाम्रो जीवनको नाविक हो, उहाँ हाम्रो जहाजलाई सुरक्षित रूपमा किनारमा पुर्‍याउनुहुनेछ।
यर्मिया :32२:२:27 “म परमप्रभु हुँ, सारा मानिसहरुका परमेश्वर। के मेरो लागि केहि गाह्रो छ? "
यो भगवान यहाँ अगमवक्ता यर्मिया बोल्दै थियो। उनले भने कि म परमप्रभु हुँ, सारा मानिसहरुका परमेश्वर। केहि मेरो लागी धेरै गाह्रो छ? ईश्वरले गर्नका लागि केहि गाह्रो छैन, उसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो, सबै ढोकाको साँचो उहाँसँग छ र सबै प्रश्नहरूको उत्तर, उहाँलाई गर्न असम्भव केहि छैन। यदि तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण भरोसा उहाँमाथि राख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईंको हृदयमा डर र भ्रम पैदा गर्ने स्थिति समाधान हुनेछ।
अघिल्लो लेखमा१० तपाईंलाई खाँचो परेको बेला प्रार्थना गर्न बाइबल पदहरू
अर्को लेखमाआत्माको फलको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू